Wararka - Waa maxay dharka kaliya ee funaanada
Jersey waa dhar tolan oo sidoo kale loo yaqaan tolida cad ama maro tolan.Mararka qaarkood waxaan sidoo kale sheegnaa in ereyga "maalin" loo isticmaalo si dabacsan si loo tixraaco dhar kasta oo tolan oo aan lahayn feeraha kala duwan.
Faahfaahinta ku saabsan samaynta hal funaanad
Jersey waxaa lagu samayn karaa gacanta wakhti dheer ka hor, waxaana ku samaynaa mashiinada tolida siman iyo wareeg ah hadda.Dharka Jersey waxaa laga sameeyaa tolida tolida ee aasaasiga ah, kaas oo wareeg kasta lagu sawiray wareegga hoose.Safafka siddooyinka waxay sameeyaan xariijimo toosan, ama wales, oo ku yaal wejiga dharka iyo safafka, ama koorsooyinka, xagga dambe.Dhar-xidhka Jersey waa kuwa fudud marka loo eego tolida kale waana kuwa tolnimada ugu dhaqsaha badan ee la soo saaro.Jersey wuxuu u fidiyaa in ka badan jihada iskutallaabtu ka badan tahay dhererka, waxaa laga yaabaa inay u nuglaadaan orodka, iyo laalaabka cidhifyada sababtoo ah farqiga u dhexeeya xiisadda hore iyo dhabarka.
Sifada maro funaanad kaliya ah
1, Dhinacyada hore iyo gadaalba way kala duwan yihiin.
2, Marooyin lagu soo saaro qaabka tuubooyinka, laakiin sidoo kale waa la gooyn karaa oo loo isticmaali karaa qaab balac furan.
3, Balaadhka ballaaran waxaa laga heli karaa maro funaanad ah marka loo eego feeraha iyo dharka is-dhexgalka.
4, Waxay u fidaysaa qiyaastii isku mid si transversely iyo longitudinally.
5, Haddii ay aad u kala fidsan yihiin, waxaa laga yaabaa in qaabkoodu qalloocan yahay.
6, Marka loo isticmaalo sida maro, waxaa ka sii daran in la duuduubo jirka marka loo eego kuwa kale ee tolman on weft-oriented ay dabacsanaantooda yar.
7, Dharka tolan ee shaadhka ah ayaa ka yar fursadaha qaabaynta marka loo eego kuwa kale.
8, Maadaama warbixinta tollida lagu sameeyay hal irbad oo saxan keliya ah, waa nooca tolida oo leh xadiga ugu yar ee dunta lagu bixiyo halkii cutubba.
9, Marka la gooyo, curladu waxay ka dhacaan dhinacyada dhinaca dambe ee dharka iyo xagga sare iyo hoose ee dhinaca hore ee dharka.
10, Waxay leeyihiin u nugul laalaabnaanta oo yar.
Dhamaystir iyo daawaynta maro funaanad ah
Jersey waxaa laga yaabaa in lagu dhammeeyo seexashada, daabacan, ama daabacan.Noocyada kala duwan ee funaanadaha waxaa ka mid ah noocyada tuulmada ee tolida iyo funaanadda jacquard.Funaanadaha tuulan waxay leeyihiin maro ama jeexyo dheeraad ah oo la geliyo si loo sameeyo maro-dhoobo ah ama dhogor been abuur ah.Funaanadda Jacquard waxay ku daraysaa kala duwanaanshiyaha tolida si ay u abuurto nashqado kakan oo lagu tolan karo marada.Dharka Intarsia waa funaanado la isku qurxiyo oo isticmaala maro midabyo kala duwan si ay u soo saaraan naqshado iyo kharash badan si ay u soo saaraan marka loo eego daabacaadda naqshadeynta sida dhamaystirka.
Isticmaalka suurtogalka ah ee dharka shaadhka ah
Jersey waxaa loo isticmaalaa samaynta hosiery, funaanado, nigisyada, dharka isboortiga, iyo funaanadaha.Waxa kale oo lagu daray suuqa alaabta guriga waxaana loo isticmaalaa gogosha iyo maraqa.
Fuzhou Huasheng Textile waxaa ka go'an inay siiso macaamiisheeda adduunka oo dhan mid tayo sare leh oo qiimo jaban lehWixii su'aal ah, fadlan ha ka waaban inaad nala soo xiriirto.